Réponses pour «tahaka»:
Total: 45 résultats - 0.14 secondes
dany .30 100%
Feno fiangonana hafahafa tahaka izao eran’i Fįraşa.
dany .20 98%
Tokony horaisina tahaka ny fisiana ho ohatra fotsiny tokóa anéfa ny famakafakána ny lalána miféhy iréo ahinkevitra matematίka voatondroko iréo.
- tsy toy ny mifanála aiña na mifanólo aiña aminy aho mantsy, amin‘izáy fotoana izáy, fa tahaka ny amin‘ny fatidrá, dia mampitambatra ny aiko amin‘ny Azy aho, ka lasa ny ainy no aiko, ary ny aiko no ainy, araka izáy voalazan‘Izy Jesóa Kįrişįtý Andriamanitra ihány, ao amin’ny Evãzίļā nosoratan‘i Masindáhy Zoány Toko Fahenina, ohatra;
Tahaka irény izáy hita amin’ny sary etsy ambóny etsy irény, ny fomba fisehon’ny trano.
Aoka áry, hoy i Moίjy mba hoferin’ny Jody miaraka aminy ny fatiko, tahaka itý itondranáy ny fatin’i Zôjéfa avy tañy Ezipįta itý ny fatiko, ka ho tonga any amin’ny Tany Nampanantenaina.
Ny Baiboly - ( Tenin'Andriamanitra ) 96%
Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ;
Miroboróbo tsy mbola nisy tahaka izány ny tsy fandriampahalemana eran’ny Ambanivolon’i Madagasikára rehétra, araka ny heviny, noho ny fahantrána.
Lahiantitra sy vaviantitra ireto izahay vao mba nahίta Tany sy Firenéna hafan’ny an’ny taina tahaka izao indray mitoraka izao.
- tsy izáho no namorona ny fihailóha –sololóha- ôrįdinatêra-ordinateur, na ny fihainίfy –solonίfy-, na ny fihaimáso –solomáso-, na ny fihaisofina findáy –des matériels comme le téléphone portable, écouteur, ekotêra-, na ny fihaihéno samy hafa rehétra, toy ny fitaovana izáy entina mihaino tahaka ny ekotếra -écouteur, na ny fihaijéry toy ny vojijéry na ny masolavitra;
Noho ny fikarohan’Andriamañitra Ralaitány, dia nanaovany kisarisáry niolankolaña tahaka ny kakanjίla ny Aiña-Feon’Andriamañitra Ralailañitra, ka notalanjoña Andriamañitra Ralailañitra.
- olombelona iza no tsy hientana, eny fa na dia iréo olombelona hafa izáy no azo heverina ho no fahavalony tahaka ahy aza, teo anatrehan’iny kabáry iny, - satrίa raha ny hevitro tamin’izáy fotoana izáy, no haposako eto ankehitrίny, dia hoy aho hoe :
Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana 83%
Raha baiko tsara tahaka ny hoe izay hahatafitana eo amin’ ny fianarana ohatra no omena ny Subconscient dia mazava ho azy fa hahazoana vokatra miabo.Raha mifanohitra amin’izay kosa dia hivangongo ny fahavoazana.
dany 8.3 80%
Rehefa avy nihorakora-pifaliana tamin’ny fifamamonoan’ny samy biby aloha indraindray ny Aperêra sy ny vahoaka, izay fihetsika noheverina ho toy ny kilalao asa verimaina tahaka ny an’ny mpihiragasy, dia ampidirina amin’izay ny karazan’olona samy hafa izay ampifanenana amin’ny bibidίa.
GALILIA 2021 V.2 Fiarahabana 75%
GALILIA 2021 V.2 Fiarahabana 3 Jaona 1:2 « Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra anie ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany.
Mba ho tahaka ny fefiloha amin=ny vato rehetra anie ny mpianakavy mpiara-dia, ka izay manampy dia manatevina;
Article GBUT n°02 2014 72%
Ampahatsiahiviko moa fa ny taona 2007, dia taona KISÓA ho an‟ny tatsinana [ho an‟ny Sinóa sy ny Zap né ohatra], tahaka ny nahataona bitro ny taona 2011 izáy nankalazaina nanomboka ny 3/02/2011;
Tahaka izáy niaiñana tao anatin’ny Fiangoñana Katôlίka Rômaŋā, dia tena nitády vola tsy toko tsy forohaña tokóa, iréto finoana vao nioriña iréto;
Averimberiko foana fa tokony tsy hoeritreretináo afa-tsy tahaka ny zavatra foroporoñina fotsiny ihány ny voasoratro rehétra ato anatin’ny Lahaporontafako ato.
AMBOHIBAO 17 nov 2012 67%
Ny Mpanjaka, Jehovah Tompon’ny Maro no hitan’ny masoko And 14 Ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny orampanala = Mitovy amin’ny fahitan’i Daniela ny Fahagola ao amin’ny Daniela 7:9 ihany koa Ny masony tahaka ny lelafo, manambara ny Mpitsara an’izao tontolo ziao, izay mahafantatra ny zavatara rehetra, ary toy ny afo mandevona ny fahotana rehetra Isan-Taona Fifohazana TOBY AMBOHIBAO 2012 Past.
Tahaka izao no fiavin’izány, hoy iláy Ramatóa Olombelona Vehivávy Venejîeliáŋā Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Renimpianakaviana :
Gazety fevrier 2019 65%
Mety ho azon’ny fakampanahy hieritreritra tahaka an’i Jonah mpaminany fa tsy mendrika handray ny Filazantsara ny olona tahaka izany.